Global Voices teny Malagasy » Nomad Green: Miatrika ny fandrahonan’ny fiitaran’ny tany hay ny olon-tsotra tia manao gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Aogositra 2018 4:17 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Lila
Amin'ny lahatsoratra androany isika hijery ny sasany amin'ireo tatitra avy amin'ireo mpiaro an-tserasera ny tontolo iainana ao Mongolia, izay nahazo fiofanana momba ny median'olon-tsotra avy amin'ny Nomad Green , nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices. Miresaka momba ny rikorikon'ny tany mihahay na mihatany efitra izy ireo ary manasongadina ny sasany amin'ireo mahery fo eo an-toerana izay miezaka mikajy ny tontolo iainana ao Mongolia.
Tsikaritra ny asan'ny Nomad Green. Manaraka azy ireo ao amin'ny Twitter  ny minisiteran'ny Voajanahary, ny tontolo iainana sy ny fizahantany.
Badamgarav nanoratra tamin'ny takelaka  (nadikan'i Solongo) fa niharan'ny fifindran'ny fasika izay niteraka haintany ny ankamaroan'ny faritra ao Mongolia.
Manontany  ny antony mahatonga ny Mongoliana ho afa-po amin'ny fivelomany mahantra ilay Botanista Dorjgotovariungerel (nadikan'i Ariungerel). Nanakiana ity bilaogera ity fa tsy mitaraina momba ny olan'izy ireo ny Mongoliana, izay mety ho araraotin'ny governemanta amin'ny filazana fa tsy misy tokony atahoran-dry zareo.
Asongadin’ i Dorjgotovariungerel (nadikan'i Ariungerel) ireo vondrom-behivavy mitondra seza misy kodiarana izay nampiofanin'i Byatshandai, lehiben'ny Fikambanan'ny Vehivavy Tantsaha Mongoliana, sy i Bayarsaikhan, agronoma. Nianatra ny fomba fampitomboana legioma any amin'ny sahan'izy ireo tsirairay avy sy hanomezana legioma organika ho an'ny fianakaviany izy ireo. Manolo kevitra ity bilaogera ity fa afaka mividy voam-boninkazo sy zana-kazo any amin'izy ireo ho fanarenana ny saha fitrandrahana ireo orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany.
Soritsoritan’ i Dorjgotovariungerel ihany koa ilay mpiaro ny tontolo iainana sady Inspektera Euguzer Khutukhutu (masina). Khutukhtu (teraka tamin'ny 1869) dia nahazo mari-pahaizana avy amin'ny sekolin'ny Bodista, ary avy eo nanangana ny tempoly “Ono oglogt” tao an-tanindrazany ao Mendsaikhan.
Nosoratan ‘i Narantsogt ny momba an'i D. Erdenedalai, lehilahy tanora Mongoliana iray te hamonjy ny tany.
Mamakia lahatsoratra hafa avy amin'ny tranonkalan'ny tetikasa  izay efa namoaka ny lahatsoratra faha-300. Vaovao tsara ho an'ny mpamaky iraisam-pirenena. Ankoatra ny dikan-teny Mongoliana, Anglisy sy Shinoa, ny lahatsoratra nomad Green dia misy amin'ny teny alemana  ihany koa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/29/125233/
 nanoratra tamin'ny takelaka: http://en.nomadgreen.org/archives/2009/10/21/3222/
 Nanamarika : http://en.nomadgreen.org/archives/2009/10/22/3227/
 Deel : http://en.wikipedia.org/wiki/Deel_%28clothing%29
 namoaka ny tafatafa : http://en.nomadgreen.org/archives/2009/12/22/4499/
 tranonkalan'ny tetikasa: http://www.nomadgreen.org/
 teny alemana: http://de.nomadgreen.org/